Vashambadziri: Ziva Aya Maitiro Ekutungamira kuBritish Kutenga | Martech Zone
Wazviona here zvandakaita ipapo? Iyi Midwesterner yakashandisa chiperengo cheBritish che maitiro pane hunhu. Ini ndaingoda kuratidza kune wese munhu kuti ndiri wepanyika sei ... kana kwete. Ini chaizvo handisati ndamboenda kuUnited Kingdom kunyangwe yeScotland neBritish nhaka parutivi rwaamai vangu vemhuri. (Maona izvo? Ndakazviita zvakare!)
Ok, kuseka parutivi (doh!), Urwu humwe ruzivo rwakakura rwakatorwa ne CM Brand. Ini ndinotenda chaizvo kuti ichi chingangove chiri chakanyatso kuratidzwa kwehunhu hwekutenga mumaguta muno muUnited States futi.
Kunzwisisa maitiro evatengi hakusi kwekutsvaga izvo zvigadzirwa kana zvipo zvekusimudzira kukwidza kune veruzhinji. Kubva pamaonero emushambadzi, zvinofanirwa kunge zviri zvekusvika kune zvakatarwa senge chikonzero nei mutengi achiita neimwe nzira mu yakasarudzika chipo chitoro, sei vanhu vanogovana ruzivo mumwe kune mumwe nemumwe, uye ndedzipi tsika kana tsika dzevanhu dziri kushanda mukuumba mafungiro avo. Max Baumber
Heano rundown yemaitiro ekuti urambe uchifunga mupfungwa dzako paunenge uchigadzira marongero ako ekutengesa kunze kwenyika (uye kunyangwe pano):
UK Vatengi vakavimbika - tora yavo data, ramba uchikurukura, uye gadzirisa yako yekushambadzira kuedza.
UK Vatengi Vanokoshesa Mahara, Kuvimbika Kuunzwa uye Chigadzirwa Kudzoka - gadzirisa nyaya dzekuendesa uye upe mahara emahara kuti ubudirire mukutengesa kwepamhepo.
UK Vatengi Tsvagiridzo Zvigadzirwa Pamhepo - ita shuwa kuti vatengi vanogona kuwana ruzivo nezve zvigadzirwa zvako online kuburikidza nekutsvaga, zvemagariro, uye yakazara chigadzirwa-yakatarisana saiti.
Zvitoro Zvichiri Zvakakosha kuBrit's Kutenga Rwendo - Sanganisa zvitoro zvako zvepamhepo uye zvepamhepo zvechiitiko chisina musono chekutenga uye mubairo muzvitoro zvekutenga uye kuvimbika.
Chigadzirwa Ruzivo rweVatengesi Vanoshamwaridzana uye Mano Ekuona Zvigadzirwa Zvakakosha - Ipa ruzivo rwakatsetseka mu-chitoro kune vatengi nekudyara mari mukudzidziswa nekuvandudza mu - vatengesi vemuchitoro.
Millennial Brits Tsvaga Kugadziriswa kubva kuSocial Networks - Wedzera kuvapo kwechiratidzo chako pasocial media.
Kutenga Nhare Kunokosha kune Vechidiki Vatengi Mapoka - Natsiridza ruzivo rwewebsite yako kuti uwedzere kutendeuka kwevatengi vadiki.
Heano akajeka infographic, Brits 'Kutenga Tsika uye Maitiro Ekushambadzira Vatengesi Vanofanira Kuziva.
Tags: BritBritainkutenga maitirokutenga maitiromuchitoro-muchitoromaitiro emireniyumu ekutenganharembozha yekutenga maitirokusimbiswa kwekutengachitoro chekutengesa maitirokunotengapasocial media kusimbiswaukuk vatengiuk kunotenga kuvimbikaUnited Kingdom
Workflows: Maitiro Akanaka Kwazvo Ekushandura Dhipatimendi Rekushambadzira Yanhasi
Act-On: Chinangwa-Chakavakwa, SaaS, Cloud-Yakavakirwa Kushambadzira Automation